Predictive Marketing Analytics na ThinkVine | Martech Zone
Kedu ihe Nlaghachi na itinye ego ga - abụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgbanwe ngwakọta ahịa gị?
Nke a bụ ajụjụ ndị ahịa buru ibu nwere usoro ịzụ ahịa siri ike (nke ziri ezi n'etiti ọtụtụ ndị na-ajụ ase) na-ajụ onwe ha kwa ụbọchị. Anyị kwesịrị ịhapụ redio maka ịntanetị? Ọ kwesịrị m ịgbanwe ahịa site na telivishọn ka m chọọ? Kedu ihe ahịa m ga - abụ ma ọ bụrụ na amalitere ịre ahịa na ntanetị?
Otutu, azịza ya na-abịa site n'ọtụtụ nyocha na efu ahịa efu. Ruo ugbu a. Ndị ahịa ejirila arụmọrụ gara aga iji kọwaa arụmọrụ ahịa n'ọdịnihu. Enwere nnukwu ihe egwu dị na nke a ka a na-agbakwunye ndị ọhụụ ọhụụ oge. Mgbanwe nke ọkwa ọkwa site na akwụkwọ akụkọ gaa na ntanetị bụ naanị otu obere ihe atụ. Ọ bụrụ n ’ịga n’ihu na-emefu ego nkewapụtara n’emeghị ka ịgbanwee ha n’ ntanetị, ị gaghị eru ike kachasị. N’ezie, ị pụrụ ịdị na-emefusị ego gị.
Uche nọ na-arụ ọrụ na "Ọ bụrụ na" ndapụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri. Ndị ahịa ha mara ezigbo mma… Anwụ na-acha, SC Johnson, LegalZoom, Del Monte, Hershey, na Citrix Online.
ThinkVine nwere ike ịme nke a site na sistemụ usoro ihe atụ gosipụtara nke emebere n'ezie na 1940. Site na ịghọta ngalaba ahịa ndị zụtara n'aka gị site na usoro ọ bụla na itinye ihe nlereanya ahụ na ngalaba ndị ọzọ na-ajụ ase, ThinkVine nwere ike iwulite ụdị amụma nke otu ahịa gị ga-esi rụọ ọrụ na ndị ọzọ. Ọ bụ nnọọ usoro.
Enwere ike itinye ihe ngosi nke ThinkVine na-etolite ogologo oge, obere oge maka ịre ahịa oge ụfọdụ, yana mbọ ahịa azụmaahịa. ThinkVine nwedịrị ike ịkọ n ’ọnọdụ kacha njọ… ọ bụrụ na ị kwụsị ire ahịa!
Mụtakwuo site na ịgagharị na ngwaahịa nke ThinkVine's Marketing Simulation na Software.
Ngosipụta zuru ezu: Onye isi oche Damon Ragusa na mụ na Bruce Taylor rụkọrọ ọrụ Ekele ọtụtụ afọ gara aga itinye usoro ndị yiri ya iji zụọ ahịa ahịa. Damon wuru ụdị ọnụọgụ dị ike sitere na profaịlụ ndị ahịa yana, site na iji akpaaka Bruce, anyị nwere ike ịmepụta akpaaka itinye ụdị ndị ahụ na ọdụ data nchekwa. A na-akpọ ngwa ahụ Prospector ma rụọ ọrụ nke ọma. Bruce emeziela ngwa a ọtụtụ afọ ma ka jiri ya maka ọtụtụ ndị ahịa azụmaahịa.
Tags: amụmanchịkọta amụmaamụma ịre ahịaEchere
Nov 3, 2009 na 3:28 AM
Doug, olee ụdị akụkọ ịzụta ihe ThinkVine kwesịrị inwe ike ime nke a? Ha nwere ike ime nke a maka ụlọ ọrụ ọhụrụ / mmalite?
Nov 3, 2009 na 3:57 PM
Ọ chọrọ n’ezie akụkọ ihe mere eme. Echere m na ọ bụrụ na ha nwere ndị ahịa zuru ezu, nchịkọta nchịkọta nwere ike ịbụ. Obi abụọ na ndị ahịa ha ga-enwe ekele maka nke ahụ! Echere m na ha jiri opekata mpe afọ 1 nke data - echere m na akwadoro 2.